Prizm, sameecadda codka saamayneysa | Ragga Stylish
Prizm, sameecadda codka dhammaystirta
Fausto Ramirez | | Tiknoolaji
Haddii aad jeceshahay taas markaad guriga gasho, the muusikada kaligiis bilaabmaa, inuu kugu soo dhoweeyo fannaaniinta aad jeceshahay, Prizm wuu guulaystay. Waa afhayeen caqli ku habboon oo la jaanqaadaya deegaanka iyo dadka Bluetooth ama WiFi.
A qalab muusikada caqli badan, yaa wax ku barta sida ku xusan macluumaadka kugu hareeraysan? Kani waa mashruuca uu abuuray Olivier Roberdet. Fikradda waa fududahay: goorma Prizm ogaadaa taleefankaaga casriga ah ama mid ka mid ah saaxiibbadaada, wuxuu muusigga ku habeeyaa deegaanka iyo qofka.
Kuxiran mahadsanid Cloud, uma baahnid inaad isticmaasho taleefan ama kombiyuutar. Codbaahiyaha ayaa garanaya qalabka, wuxuuna awoodaa inuu ogaado marka qof soo galo isla qolka uu isagu joogo. Wareegtada ayaa waliba la qabsata. Haddaad tahay dadka guriga ku jira, Prizm decibels ayaa kici doona, haddii ay jiraan laba qof oo keliya, the muusikada wuxuu u yeeri doonaa jilicsan
Howlgalka ee cod-weyne haba yaraatee ma aha wax isku murugsan. Marka wadnaha la cadaadiyo, wadada la sheegayo ayaa lagu duubay adiga ugu cadcad, halka haddii aad riixdo iskutallaabta, waxaad aadeysaa wadada soo socota.
Intaa waxaa dheer, a aplicación khaas ah ayaa kuu oggolaanaya inaad u qaabeysid af-hayeenka hadba sida isticmaaluhu rabo. Xilligan la jaan qaadaya macruufka y Android. Qalabka ayaa qiimihiisu u dhexeeyaa 80 ilaa 100 euro. Hadda saytuun ah Robertet waxay soo aruurisay in kabadan $ 70 oo doolar oo loogu baahnaa in lagu hormariyo mashruuca. Wixii hada ka dambeeya, waxaa la soo jeediyay in la gaaro $ 000 si loo awoodo wax soo saar Prizm midabo kala duwan leh, waxayna kuxirantahay dhamaan dhadhanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Prizm, sameecadda codka dhammaystirta
Saddex baarkinka Bershka xilligan dayrta-jiilaalka
Ka faa'iidayso biyaha markaad baaskiil wado